Wubetumi Abɔ Nnipa Pii Kɔkɔ? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Sini bi yii ne ti bɛyɛ afe 1906. Nnipa a wɔredi akɔneaba wɔ San Francisco, U.S.A, mmɔnten so na wɔwɔ sini no mu. Wɔtoo sini no din A Trip Down Market Street. Ná ɛyɛ sini bi a kasa nni mu. Wɔn a wɔreyɛ sini no de mfoninitwa afiri sii kar bi so faa mmɔnten so twaa nnipa a wɔnam lɔre kwan ho redi akɔneaba. Wohwɛ sini no a, wuhu apɔnkɔ a wɔretwe nteaseɛnam ne kar a wɔyɛɛ no teteete no bi wom. Bio, wubehu nkurɔfo a wɔredi gua ne mmerante a wɔretɔn atesɛm nkrataa.
Wohwɛ sini no a awɔse begu wo. Nea enti a ɛte saa ne sɛ ɛbɛyɛ sɛ wotwaa sini no April 1906, na ankyɛ na asasewosow kɛse ne ogya bi bɔ faa baabi a wotwaa sini no. Asasewosow no sii April 18, na ekunkum nnipadɔm dwiriw adan gui, na ɛsɛee nneɛma pii. Awerɛhosɛm ne sɛ ebia sini no mu nnipa pii ka wɔn a wowui no ho. Owura bi a yɛfrɛ no Scott Miles busuani ka wɔn a wɔyɛɛ sini no ho. Owura yi kae sɛ: “Wohwɛ sini no a, wuhu sɛ nnipa redi akɔneaba nanso wonnim nea ɛrebɛto wɔn. Nea ɛma asɛm yi yɛ me yaw koraa ne sɛ obiara ntumi mmoa wɔn.”
Asasewosow ne ogya a ɛsɛee San Francisco 1906 no ammɔ nkae biara
Wususuw asɛm yi ho a wubehu sɛ ne sɛso bi wɔ hɔ nnɛ. Yɛn nso nkurɔfo a wɔatwa yɛn ho ahyia asɛm haw yɛn. Daa wɔsɔre kɔ wɔn nnwuma so di akɔneaba nanso wonnim sɛ biribi rebobɔ ba; wonnim sɛ wiase nhyehyɛe yi ne emu nneɛma rebɛsɛe. Asasewosow no baa putupuru, nanso yɛn deɛ yɛwɔ bere kakra a yɛde bɛbɔ nkurɔfo kɔkɔ ansa na Yehowa atemmuda no adu. Ebia woayi bere bi asi hɔ a wode yɛ afie afie asɛnka adwuma no nnawɔtwe biara, nanso wubetumi ayɛ bi aka ho ama nnipa pii ahu nea repempɛn so no?
NA YESU AYƐ KRADO DAA
Yesu ayɛ nhwɛso fɛfɛɛfɛ bi ama yɛn. Ɛne sɛ daa na wayɛ krado sɛ ɔbɛka asɛm no. Ɔkaa asɛm no kyerɛɛ obiara—towgyeni a ɔte kwan nkyɛn oo, ɔbea a ɔrebɛto nsu awiabere oo—obi biara. (Luka 19:1-5; Yoh. 4:5-10, 21-24) Sɛ Yesu regye n’ahome mpo a, otwa so de kyerɛkyerɛ afoforo. Na Yesu yam hyehye no ma nnipa, enti wanyɛ asɛnka adwuma no bi-ne-bi. (Mar. 6:30-34) Dɛn na ebinom reyɛ nnɛ de suasua Yesu?
HOKWAN BIARA YI NE TI A WOSO MU
Melika te baabi a wɔabɔ ho ban denneennen. Nnipa a wɔtete ne mpɔtam hɔ pii yɛ sukuufo a wofi amannɔne aba hɔ. Nanso sukuufo yi deɛ, wɔn telefon nɔma nni nhoma a telefon nɔma wom no. Ohui sɛ ɔkwan titiriw a obetumi adi ɛhɔfo adanse ne sɛ ɔbɛkɔ baabi a nkurɔfo tenatena ne afiri a wɔde foro aborɔsan mu. Ɔkae sɛ: “Mede hɔ ayɛ m’asasesin.” Melika nam a, ɔfa nhoma wɔ kasa pii mu, na nnipa pii gye nkratawa ne nsɛmma nhoma. Ɛyɛ a ɔkyerɛ wɔn sɛ yɛwɔ Intanɛt dwumadibea bi a wobetumi akɔ hɔ—jw.org. Eyi nti wanya nnipa pii ne wɔn sua Bible.
Sonia nso ayɛ krado sɛ obiara a obenya no no, obedi no adanse. Ɔyɛ adwuma wɔ ayaresabea bi, na ɔde asi n’ani so sɛ obedi adwumayɛfo no nyinaa adanse. Nea ɔyɛe ne sɛ ɔbɔɔ mmɔden sɛ obehu nea adwumayɛfo no biara ani gye ho. Afei edu awia a wɔregye wɔn ahome a, ɔbɔ mmɔden sɛ obenya biako anaa baanu bi ne wɔn abɔ nkɔmmɔ. Eyi ama Sonia anya nnipa baanu a ɔne wɔn sua Bible. Seesei nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ edu ahomegye bere a ɔbɛkɔ baabi a nnipa retwɛn akohu dɔkota na wadi wɔn adanse.
MMA HOKWAN BIARA NTWAM
Obi a onyaa ne ti didii mu wɔ asasewosow a esii 1906 mu no kae sɛ: “Ɛyɛ atoyerɛnkyɛm a ani yɛ nyan sen biara a ato kurow bi.” Nanso ɛrenkyɛ aweredi da no bɛba “wɔn a wonnim Onyankopɔn” nyinaa so, na ne kɛse bɛma atoyerɛnkyɛm biara ayɛ sɛ mframa bi a ɛretwam kɛkɛ. (2 Tes. 1:8) Nea Yehowa pɛ paa ne sɛ nkurɔfo bɛsesa wɔn adwene ne wɔn koma na wɔatie kɔkɔbɔ a n’Adansefo de rema no.—2 Pet. 3:9, Adi. 14:6, 7.
Wode hokwan biara a wubenya bedi nkurɔfo a wuhyia wɔn no adanse?
Wowɔ akwannya kɛse bi. Ɛne sɛ wubebue nkurɔfo ani ma wɔahu tebea a yɛwom seesei, na woaboa wɔn ma wɔde wɔn akɔnnɔ ato nkyɛn ahwehwɛ Yehowa akyi kwan. (Sef. 2:2, 3) Ɛnde, wunya hokwan a wode bedi wo mfɛfo adwumayɛfo, w’afipamfo ne nkurɔfo a wuhyia wɔn da biara da no adanse a, wubeso mu anaa? Wobɛyere wo ho abɔ nnipa pii kɔkɔ?